Cote d'Ivoire dia manamafy ny tranga Ebola voalohany tao anatin'ny 25 taona
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Cote d'Ivoire Vaovao Vaovao » Cote d'Ivoire dia manamafy ny tranga Ebola voalohany tao anatin'ny 25 taona
Birao fizahantany afrikanina • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Cote d'Ivoire Vaovao Vaovao • Vaovao momba ny fahasalamana • Vaovao • fanorenana • tompon'andraikitra • Safety • Tourism • Travel Wire News • Vaovao isan-karazany
Ahiahy mafy tokoa ny nanambarana ity valanaretina ity tany Abidjan, tanàn-dehibe misy olona mihoatra ny 4 tapitrisa.
Ny marary iray tonga avy any Guinea dia naiditra hopitaly tao amin'ny renivohitra ara-barotra ao Abidjan.
Ny olona hopitaly dia nandeha nankany Cote d'Ivoire tamin'ny làlana ary tonga tany Abidjan tamin'ny 12 Aogositra.
Nampidirina hopitaly ilay marary rehefa avy nanavy.
Biraon'ny firenena Cote d'Ivoire an'ny WHO namoaka fanambarana nilaza fa ny virus Ebola dia hita tao amin'ireo santionany nangonina tamin'ny marary iray izay naiditra hopitaly tao amin'ny renivohitr'i Abidjan, taorian'ny nahatongavany avy tany Guinea.
Ny fanadihadiana natao voalohany dia nahatsikaritra fa efa nandehandeha ilay marary Cote d'Ivoire tamin'ny làlana ary tonga tany Abidjan tamin'ny 12 Aogositra. Nampidirina hopitaly ilay marary rehefa avy nanavy.
Tany am-piandohan'ity taona ity dia niaina valan'aretina Ebola maharitra efa-bolana i Guinea, izay nambara tamin'ny 19 Jona 2021. Nilaza ny OMS fa tsy misy porofo manamarina fa ny tranga any Cote d'Ivoire dia mifandraika amin'ny valan'i Guinea, saingy nanampy fa ny famotopotorana bebe kokoa dia hamantatra ny soritr'aretina ary hamaritana raha misy fifandraisana misy eo amin'ireo valanaretina roa ireo.
Tamin'ity taona ity dia nisy ny valan'aretina Ebola tany amin'ny Repoblika Demokratikan'i Kongo sy Ginea, saingy sambany nisy ny valanaretina tao an-drenivohitra lehibe toa an'i Abidjan hatramin'ny faran'ny Ebola Andrefana 2014–2016.
"Mampiahiahy izaitsizy fa nambara tao Abidjan ity valanaretina ity, tanàn-dehibe misy olona mihoatra ny 4 tapitrisa," hoy i Dr Matshidiso Moeti, talen'ny faritra eran-tany ho an'ny fahasalamana (OMS). “Na eo aza izany, ny ankamaroan'ny fahaizan'izao tontolo izao amin'ny fikirakirana ny Ebola dia eto amin'ny kaontinanta ary i Cote d'Ivoire dia afaka mitrandraka an'io traikefa io ary mitondra ny valiny haingana. Ny firenena dia iray amin'ireo enina izay notohanan'ny WHO tato ho ato mba hanamafisana ny fahavononany Ebola ary io fitiliana haingana io dia mampiseho fa misy valiny ny fahavononany. ”